War cusub oo ka soo kordhay baaritaanka guriga Qunsulka Sacuudiga ee Istanbul – Wakaaladda Wararka Hiilnews
War cusub oo ka soo kordhay baaritaanka guriga Qunsulka Sacuudiga ee Istanbul
Arbaco, October, 17, 2018(HNN) Laamaha amniga iyo dembi baarayaasha Turkiga ayaa dib uga baxay Guriga Qunsulka Sacuudiga ee magaalada Istanbul, kadib markii laga hor istaagay inay baaritaan ku sameeyaan gudaha Guriga.
Booliska Turkiga ayaa ku tuhunsan Guriga uu degan yahay Qunsulka Mohamed Alcuteybi oo dhow Qunsuliyadda Sacuudiga in lagu qariyey meydka ama Jirka saxafiga Jamal Kashoqgi oo la sheegay in lagu dhex dilay Qunsuliyadda daqiiqado kadib markii uu galay 2-dii bishan Oktoobar.
Wadahadal muddo ku dhow 5 saacadood oo dhexmaray diblomaasiyiinta Sacuudiga iyo Baarayaasha Turkiga ayaa la isku mari waayey, markii ay Sacuudiyiintu diideen in la baaro Guriga Qunsulka, waxaana ugu danbeyn halkaasi ka tegay goor dhoweyd kooxdii baarayaasha Turkiga.
Qunsulka Sacuudiga oo wararkii ugu danbeeyay sheegayaan inuu goobjoog ahaa markii la dilayey Jamal Kashoqgi, ayaa ka dhoofay magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga, isagoo ku laabtay dalkiisa.
Turkiga ayaa dadaal ugu jiray inay su’aalo weydiiyaan Qunsulka Sacuudiga oo laga rabay in wax laga weydiiyo su’aalo ku saabsan waxa uu ka ogyahay arrinta kiiska Jamal Kashoqgi.
Weli lama oga in baarayaasha Turkiga ay ku soo laaban doonaan guriga Qunsulka iyo in kale, waxayna xaaladda u muuqataa in gurigaas isha lagu hayo, iyadoo sirdoonka Turkiga ay la socdaan dhaqdhaqaaqa gurigaas ka dhex jira.
War cusub oo ka soo kordhay baaritaanka guriga Qunsulka Sacuudiga ee Istanbul added by Ciise Cabdi Ciise on 17/10/2018